အရဲစွန့် ပြီး အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ မောင်တောနယ်စပ်ခြံစည်ရိုးကိုးသွားခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ – Askstyle
အရဲစွန့် ပြီး အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ မောင်တောနယ်စပ်ခြံစည်ရိုးကိုးသွားခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ အလွမယ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့တဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး နန္းခင္ေဇယ်ာကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ေမာင္ေတာ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ေရာက္ေနခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
နန္းခင္ေဇယ်ာဟာ အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းတဲ့ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ၿခံစည္႐ိုးကို အရဲစြန႔္ၿပီးသြားခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္အခ်ိဳ႕ကို “ဘယ္နားက ၿခံစည္း႐ိုးလို႔ထင္လဲ? အိမ္ကၿခံစည္း႐ုံးမဟုတ္တာေတာ့ေသခ်ာတယ္။” လို႔ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။မင္းသမီးေခ်ာေလး နန္းခင္ေဇယ်ာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Miss international 2015 Winner အလွမယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကိုရရွိထား သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ မၾကာေသးမီကမွ ပရိသတ္ေတြၾကား စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္မႈ ျမင့္တတ္ေနတဲ့ The Mask Singer Myanmar ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာလည္ ေရခဲမုန႔္မ်က္ႏွာဖုံးပိုင္ရွင္အျဖစ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ “You are my papi” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းသစ္ေလး ထြက္ရွိထားၿပီး ဒီသီခ်င္းေလးကိုေတာ့ အဆိုေတာ္ဝိုင္းေလးကိုယ္တိုင္ ေရးသားေပးခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသမီးေခ်ာ နန္းခင္ေဇယ်ာကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ ေမာင္ေတာ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ေရာက္ရွိေနရင္း အႏၲရာယ္မ်ားလြန္းတဲ့ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ၿခံစည္႐ိုးကို အရဲစြန႔္ၿပီးသြားခဲ့ပါေသးတယ္ေနာ္။ သတိကေတာ့မနည္းဘူးေနာ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ။
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး နန်းခင်ဇေယျာကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၂)နေ့မှာကျရောက်တဲ့ (၇၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ မောင်တော ဒေသခံပြည်သူတွေကို ဖျော်ဖြေဖို့ရောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာဟာ အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ မောင်တောနယ်စပ်ခြံစည်ရိုးကို အရဲစွန့်ပြီးသွားခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်အချို့ကို “ဘယ်နားက ခြံစည်းရိုးလို့ထင်လဲ? အိမ်ကခြံစည်းရုံးမဟုတ်တာတော့သေချာတယ်။” လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းသမီးချောလေး နန်းခင်ဇေယျာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု Miss international 2015 Winner အလှမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိထား သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ မကြာသေးမီကမှ ပရိသတ်တွေကြား စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်မှု မြင့်တတ်နေတဲ့ The Mask Singer Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးမှာလည် ရေခဲမုန့်မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်အဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ “You are my papi” ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်လေး ထွက်ရှိထားပြီး ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ အဆိုတော်ဝိုင်းလေးကိုယ်တိုင် ရေးသားပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချော နန်းခင်ဇေယျာကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၂)နေ့မှာကျရောက်တဲ့ (၇၃)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ မောင်တော ဒေသခံပြည်သူတွေကို ဖျော်ဖြေဖို့ရောက်ရှိနေရင်း အန္တရာယ်များလွန်းတဲ့ မောင်တောနယ်စပ်ခြံစည်ရိုးကို အရဲစွန့်ပြီးသွားခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ သတိကတော့မနည်းဘူးနော် ပရိသတ်ကြီးရေ။